China Door Lock Slot hwokugaya hwakabvira Machine fekitari uye vagadziri | Gladline
Door Lock Slot Yekugaya Machine
Door Lock Slot Milling Machine ine imwechete chokurukisa uye yakapetwa kaviri mhando.
Door Lock Slot Milling Machine chinhu chakakosha kwazvo mumishini yekuveza. Iyo inoshandiswa mukugaya uye kuchera nzvimbo dzendege uye padivi kiyi maumbirwo emasuwo emapuranga.
Kureba kwakawanda 220 mm
Max ekugaya kudzika 120 mm
Max azvikuya upamhi 30 mm
Kushanda simudza kukwirira 100 mm
Main chokurukisa kumhanya 1000 R / m
Simba 0.75 / 1.1 kw
Iyo Door Lock Slot Milling Machine chinhu chakakosha kwazvo muchina mukuveza michina. Inonyanya kushandiswa kugadzirisa magonhi emapuranga, mafuremu egedhi, mafuremu ewindo, mabhureti emabhandi, makiyi emusuwo, masitepisi ekiyi emasuo, hinji hovha, uye-imwe-nguva yekupedzisa; anoshandiswa emapuranga edhoo rematanda uye mativi Iyo yekukomba-yakaumbwa-yekugaya uye yekuchera slot yekuumba inogona zvakare kushandiswa yekumisikidza uye kuchera kwehuni fanicha; zvirinyore uye nekunyatso kudzora kugadzirisa uye kugadzirwa zvinodiwa zvegedhi kukiya masisitimu uye hinji.
The Door Lock Slot hwokugaya hwakabvira Machine kazhinji rinoumbwa zvemaziso zvinoriumba akadai azvikuya vematombo, azvikuya cheap car insurance, worktables, Motors, uye shanduka-nokukurumidza chibooreso rinovira. Izvi zvemaziso zvinoriumba zvine mabasa avo uye hunhu. Izvi zvinoshanda pamwe chete, zvinowirirana, uye zvine rusununguko; mufambisi anowanzo kugona kuita mashandiro akareruka nehunyanzvi hwekushanda.
1. Door Lock Slot Milling Machine inogadzirwa yemhando yepamusoro simbi ndiro nekukotama uye kugadzira, kunoitwa nepamusoro tembiricha kurapwa.
2. Ndege chinzvimbo uye chimiro chekiyi chinoumbwa nekuteedzera chigayo, uye chakuvhuvhu chinogona kuitwa neMDF, iri nyore uye inoshanda.
3. Iwo marefu uye mapfupi makoresi egomba regedhi remusuwo wedanda anodzorwa neyakawandisa kutendeuka, iyo eccentric vhiri inofamba ichidzoka nekudzika yekugaya, uye yakakosha yekumisikidza kifaa inogona kuona otomatiki yekugaya nekuumba.
4. Horizontal uye yakatwasuka feed inotsvedza, ichitora mativi ehuremu giraidhi inotakura, yakanyanya kunyatsoita, ruzha rwakadzika, inonzwisisika uye yakavimbika, yakagadzikana uye hwakareba hupenyu hwebasa.
5. Yekucheka chishandiso inotora nyowani mhando yekucheka chishandiso, iri yakapinza. Iyo mota inoshanduka kumhanya chibooreso seti yakagadzirirwa uye inoshandiswa, uye mhedzisiro yacho yakanaka.
6. Iyo yekumanikidza yekushandisa inotora mweya humburumbira yekutsikirira, inova inonamira uye yakavimbika.
7. Kugadziriswa kuri nyore uye mashandiro, kuchengetedza nguva uye kushanda nesimba.
8. Yakachengeteka uye yakavimbika, sekureba sekunge switch yacho isina kumanikidzwa zvine simba panguva yekushanda, simba rese harigone kutanga. Kana kusagadzikana kukaitika panguva yebasa, inomira zvoga.
Kugadziriswa kwemazuva ese:
(1) Tarisa mabhaudhi uye nzungu kwese kwese, uye uzvisimbise.
(2) Tarisa kubatana kwesangano rega rega, uye bvisa chero zvakashata. Zora mafuta akabatanidzwa zvikamu.
(3) Tarisa iyo pneumatic system.
(4) Tarisa iyo magetsi system: Mushure mekubatidza simba, tarisa iko kutenderera kwekutenderera kwemota.
(5) Chengetedza midziyo yakarongedzwa uye nekuchenesa tsvina pabhenji rebasa.
Pashure: Hinge Boring muchina
Zvadaro: Band Vakaona
Hydraulic Lock Munyori